Otu esi amata ngwa ndị ị na-ejighi ma hichapụ ha ngwa ngwa | Gam akporosis
Ka afọ gafere, ihe kachasị mma bụ na ọ bụrụ na anyị bu n'obi imegharị ọdụ anyị, anyị agaghị ahụ ụdị nke ga - amalite na nchekwa 64 GB, ọ bụrụhaala na anyị ahọrọ n'etiti etiti. Na ebe nchekwa ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ na-ata ahụhụ site na dijitalụ Diogenes.
Digital Diogenes na-agba onye ọrụ ume ka ọ budata ngwa ọ bụla ma ọ bụ egwuregwu ọ bụla iji nwaa, ma mesịa debe ya na ngwaọrụ ọ bụ ezie na anyị doro anya na anyị agaghị eji ya ọzọ. Naanị ma ọ bụrụ na anyị agwa onwe anyị. Akwadoghị ihe a ka ọ na-emetụta arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe ngwa ọdịnala ị naghị eji ma hichapụ ha dị mfe na-agụ.
Ọ bụrụ na anyị nwere ebe nchekwa dị egwu n’ihe gbasara ekwentị anyị, ọ nwere ike ịbụ na iji ebe nchekwa ezuola iji kpochapụ ngwa niile anyị anaghị eji ihe ọ bụla ebe ọ bụ na anyị tinyere ya na ngwaọrụ anyị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị nwere ike jiri ngwa dị mma Google nyere anyị. Ana m ekwu maka Faịlị.
Faịlụ bu ezigbo ihe eji aru oru anyi ji eme otutu oru na-enweghị iji ngwa ndị ọzọ. O nwekwara ego ma na-arụ ọrụ dika amara. Otu n'ime nhọrọ ndị ọ na-enyekwa anyị, na-enye anyị ohere hapụ ohere nke ngwa / egwuregwu anyị ejiri amata na anyị ejiribeghị obere oge iji kpochapụ ha ma nweta ohere karịa na ngwaọrụ anyị.
Hichapụ ngwa na gam akporo na anyị anaghị eji
Nke mbụ, anyị aghaghị budata ngwa ahụ Site na njikọ m na-ahapụ na njedebe nke isiokwu a ma ọ bụrụ na anyị ejighị ya.
Ọzọ, anyị na-emeghe ngwa ma gaa na nhọrọ Ghichaa. Anyị gbadaa ma chọọ maka nhọrọ ahụ Ngwa ndị ị na-ejighi wee pịa gaa n'ihu.
Ọzọ, ngwa ahụ ga-egosi anyị ngwa ndị anyị jibeghị ihe karịrị otu ọnwa.
N'ụzọ dị otu a, anyị nwere ike ịchọpụta ngwa ndị ahụ nke ihe niile ha na-eme bụ iweghara ohere na ọdụ anyị, ohere anyị nwere ike ịrara maka ihe ndị bara uru karị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Etu ị ga - esi amata ngwà ị na - ejighi wee hichapụ ha
PAYDAY: War Crime's siri ike 4v4 freemium ọtụtụ ga-abịa